Ny fahaverezan'ny satan'ny lova manerantany dia hanakorontana ny famerenana amin'ny fizahan-tany Liverpool
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Ny fahaverezan'ny satan'ny lova manerantany dia hanakorontana ny famerenana amin'ny fizahan-tany Liverpool
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Orinasa lehibe izao ny fizahan-tany ara-kolotsaina, miaraka amin'ny 29% amin'ny tsenan'ny dia manerana izao tontolo izao izay mazàna manao io karazana dia io.
Mandany be kokoa eo ho eo ny mpizahatany iraisam-pirenena raha oharina amin'ireo mpizahatany any an-toerana.
Liverpool izao dia vonona hamoy tombontsoa maro samihafa noho ilay fanambarana vao tsy ela akory izay.
Mila mavitrika amin'ny fomba fikirakirany an'ity vaovao ity i Liverpool.
Na dia mety tsy hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny lafiny fizahan-tany aza ny fangatahana fizahan-tany any an-toerana fahaverezan'ny satan'ny lova eran-tany Liverpool, ny fangatahana iraisampirenena dia mety ho maro ny mpizahatany iraisam-pirenena mitsidika an'i Liverpool hiaina ny kolontsaina sy ny tantaran'ny tanàna.
Orinasa lehibe izao ny fizahan-tany ara-kolotsaina, miaraka amin'ny 29% amin'ny tsenan'ny dia manerana izao tontolo izao izay mazàna manao io karazana dia io. Ny fahaverezan'ny satan'ny lova azony dia mety hampamirapiratra ny fitarainan'ny kolontsain'i Liverpool ary hiteraka fitsidihan'ny mpizahatany iraisam-pirenena any amin'ny toeran-kafa any UK mitazona ity marika ity, toa an'i Bath.
Mandany be kokoa eo ho eo ny mpizahatany iraisam-pirenena raha oharina amin'ireo mpizahatany any an-toerana. Raha ny angon-drakitra momba ny indostria, tamin'ny taona 2019 (taona 'ara-dalàna' farany ho an'ny fizahan-tany), ny salanisan'ny fandaniana fizahan-tany isaky ny mponina dia nitentina 1,057 dolara amerikana, raha ny salanisan'ny fandaniana fizahan-tany isaky ny mponina any Angletera dia mitentina US $ 263 (GB £ 191).
Liverpool mila manintona fizahan-tany iraisam-pirenena betsaka araka izay azo atao amin'ny taona ho avy mandinika ny habetsaky ny vola miditra vokariny. Raha tsy eo intsony ny satan'ny lovany, dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fangatahana iraisampirenena ary ho elaela ny fanarenana.
Liverpool izao dia vonona hamoy tombontsoa maro samihafa noho ilay fanambarana vao tsy ela akory izay. Araka ny efa voalaza, ny fampitomboana ny gazety sy ny dokambarotra izay tonga miaraka amin'ny toerana misy lova manerantany dia mampitombo ny fizahan-tany iraisam-pirenena ary miasa ho toy ny fitaovana marketing matanjaka izay tsy andoavan'ny tanàna vola firy. Ny fananana ny satan'ny vakoka manerantany dia saika marika famantarana kalitao hijeren'ny tsena iraisam-pirenena. Izy io dia misy akony manokana amin'ny tsena loharanom-pahalalana sinoa matanjaka izay fantatra fa voataonan'ireo tag izay manondro ny kalitao na ny hatsarana. Eo ambanin'io satan'isa io, ireo vakoka dia azo ekena ihany koa handray vola ho fiarovana sy fikojakojana.
Ny famangiana iraisampirenena dia mety naka fotoana nihatsara taorian'ny faharetan'ilay areti-mandringana na izany aza, ity fitomboana ity dia mety ho ela kokoa vao sitrana ankehitriny satria very ny toetoetran'izao tontolo izao nolovaina i Liverpool. Mila mavitrika ny tanàna amin'ny fomba itondrany ity vaovao ity, na amin'ny alàlan'ny fananganana fanentanana marketing vaovao ho an'ny tsena iraisam-pirenena, na amin'ny fiantsoana haingana io fanapahan-kevitra io mba hamerenany ny zava-manintona ara-kolontsaina.